Imayile yokuntywila yentlanzi ethengiswayo,Ungazenza njani iipellets zentlanzi edada
Amandla:15kw + 0.4kw isigaba sesithathu
Ukwazisa ngePellet Mill yaManzi agudileyo
Uhlobo olomileyo lomatshini wokuhambisa iintlanzi, ikwabizwa ngokuba kukutya kwentlanzi ngepellet, isetyenziswa ngokubanzi ekuveliseni izixhobo ezahluka-hlukeneyo kwiipellets zamanzi akwiqondo eliphakamileyo lentlanzi, intlanzi yekati, iimbadada, Crab njl. Iipellets zokugqibela zokutya zinesimo esikhethekileyo kunye nencasa elungileyo, ukutya okunesondlo okuphezulu kunye nokwenza izinto ezigudileyo. Ukuzondla ngeentlanzi kunye ne-shrimp, ixesha lokudada kumphezulu wamanzi linokutshintshwa ngohlengahlengiso lwe-extrusion degree xa ukhupha i-pellets. Okwangoku, intlanzi yokuntywila yentlanzi iyeyinto efanelekileyo kwifama yeentlanzi ezincinci nezinphakathi (intlanzi yekati, tilapia, istrimp njl.) ababambe okanye indawo yokulungiselela ukutya.
Ukusebenza koMgaqo wokuFuduka kwePellet Mill
Akukho sidingo sokushisa ngaphandle komatshini wokudada we pellet weentlanzi, ngokusebenzisa isikhafu esivela kwizinto ezingafunekiyo, Ubushushu buveliswa kwaye buthwa ngexesha lenkqubo yokusebenza ejikelezayo kwimeko yomoya, kwaye ngexesha lokuvuthwa kobushushu obuphezulu, Isitatshi kunye nefayibha yento ekrwada iyadumba. Emva koko uphantsi kwengcinezelo, Izinto ziya kwenziwa iipellets ngokubumba ubumba. Ekugqibeleni, ngoxinzelelo oluphezulu oluveliswa kukujikeleza kwesikali rhoqo, emva kokuba unqunyulwe umsiki ongaphambili ojikeleza rhoqo nangokukhawuleza, iimveliso ezigqityiweyo ziya kuncipha kwaye zibe ziibhotile ezincinci ezikhukhumeleyo kwixabiso lokushisa kwigumbi kunye noxinzelelo.
Izinto eziluncedo ekuFuduleni kwePellet Mill
● Ukugcina: inokugcinwa iinyanga ezimbini ukuya kwezintathu xa igcinwe kwindawo eyomileyo epholileyo.
● Ucoceko: Inkqubo yokwandiswa inokuphelisa uninzi lweentsholongwane. Umxholo omncinci wokufuma (malunga 10%) kungathintela ukukhula kwebhakteriya.
● Isondlo: Unokongezwa kwiproteyini yezilwanyana okanye yesityalo, ioli yeentlanzi okanye ezinye iifatata, Ubunzima bevithamini kunye neeminerals ezifunekayo kwiintlobo ezithile zeentlanzi. Inesondlo kakhulu kwaye inokuphucula impilo yezitokhwe.
● Iimpembelelo zokusingqongileyo: ukusebenzisa i-pellet feed yobungakanani obufanelekileyo kunye noxinano kunokwehlisa inani lokulahleka kwaye kunciphise kakhulu ukungcoliseka kwendalo okubangelwa yintsalela yokutya.
Indlela echanekileyo yokuKondla
1. Musa ukondla ngokukhawuleza okanye kakhulu. Oku kuchitha imali kwaye kungcolisa iifama zeentlanzi.
2. Jonga indlela intlanzi esabela ngayo ekondleni kwaye yabele ukutya okufanelekileyo. Ukusetyenziswa kancinci kunokuba luphawu lwesifo okanye ukuwohloka komgangatho wamanzi.
3. Kungcono ukubapha ukutya rhoqo rhoqo ngamanani amancinci.
4. Ukuba usebenzisa ipellet eyomileyo, Cinga ngokuba nomatshini otya ngokuzenzekelayo ofakelwe ukugcina amandla.
5. Ukugcina irekhodi lolawulo lweefama kunceda amafama okuloba ngokulawula iindleko kunye nokukhetha indlela efanelekileyo yolawulo. Kuyanceda ukubona ukuqhambuka kwesifo okunokwenzeka kwinqanaba lokuqala.
Idatha yezobuGcisa yokuDada kwiPellet Mill
Umboniso we-pellet yokuloba weentlanzi